Nkwado - MAKEFOOD INTERNATIONAL CO., LTD
Azụ E Ghere eghe & Achịcha
Anyị na-agbanwe ngwaahịa anyị iji gboo mkpa ahịa.
Emee nri na nkwado
Nọgide na-enwe nkwado maka inye anyị ihe dị mkpa bụ ihe kachasị mkpa maka ọganihu nke azụmahịa anyị na ụlọ ọrụ n'ozuzu ya.
Dịka otu n’ime ndị na-ere ahịa azụ na ụwa, anyị nwere nnukwu mmasị maka ahụike ogologo oge nke Oke Osimiri anyị. Ego dị ukwuu nke ihe oriri dị na mmiri bụ nke anụ ọhịa na - ejide nke nwere ike ibute azụ azụ, njide achọghị, yana ụzọ ịchụ nta mbibi. Site n'omume anyị, anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ na anyị chebere ebe obibi mmiri yana obodo ndị ahụ dabere na iwepụta akụ ya, maka ọgbọ ndị na-abịa n'ihu.
Nkwenye anyị maka nkwado azụ na nri bụ ogologo oge dịka anyị ghọtara na enweghị mmezi ọsịsọ. Anyị na-akwado azụ azụ ndị ahụ nwere ọrụ, na-adigide omume ịkụ azụ na obi nke ihe niile ha na-eme.
Anyị na-ewere echiche na anyị kwesịrị ịrụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ iji duzie ma nwee mmetụta, iji mee ka ndị ahịa anyị na ndị na-azụ ahịa kwalite usoro ijigide na mmepụta.
Anyị na-akwado ọrụ nke ọtụtụ ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị dịka MSC (Marine Stewardship Council) na Alaska RFM (Responsible Fisheries Management) bụ ndị setịpụrụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ dị elu iji hụ na mmetụta gburugburu ebe obibi pere mpe na Fisheries Global.
Principleskpụrụ anyị kwuru ka anyị:
Chọọ nkwenye nkeonwe nke atọ n'ebe ọ bụla enwere ike ma nye ndị na-azụ ahịa nnabata ikike.
Anyị na-achọ ịmara isi mmalite na ngwaahịa anyị na-ere ma gbalịa ibelata usoro ọkọnọ ebe ọ bụla enwere ike.
Anyị anaghị akpachara anya na-ere ngwaahịa na-emebi gburugburu ma ọ bụ na-etinye ndụ nke ụdị ihe na-enweghị atụmatụ iji mezie nzere nkwado nke ngwaahịa a.
Anyị na-adọta ndị ahịa anyị na ndị na-ebubata ya iji mee nhọrọ ndị ọzọ ga-adigide.
Anyị nwere ihe ịga nke ọma na mwepụta nke nkwakọ ngwaahịa compost anyị ọhụrụ maka ngwaahịa azụ mmiri oyi anyị na 2020. Ọchịchọ ịme mmetụta na imepụta mmegharị emeela ka mgbanwe nke Makefood banye n'iji ngwugwu compostable. Site n'ime nke a anyị na-atụ anya ime ka onye na-azụ ahịa, chee echiche nke ọma banyere mmetụta nkwakọ ngwaahịa plastik na-anaghị eweghachi nwere na gburugburu ebe obibi; ma anyị nwere ike ịmatakwu banyere mmepụta ya oke. Ebumnuche anyị bụ, ọ bụghị naanị ime ka ebe ndị mepere emepe dị ọcha mana nke ka mkpa bụ, mmiri anyị, ebe ngwaahịa anyị sitere. N'aka nke ya, na-ebelata ihe ndị na-adịghị mma metụtara ụlọ ọrụ nri mmiri.
Na Makefood anyị ewerela nzọụkwụ mbụ, yana ọnụ, anyị nwere ikike iji mepụta ọdịnihu ka mma ma dị ọcha. Na-akwado nkwado site na ihe ọhụrụ.
Anyị ekweghị na usoro a ga-akwụsị. Ọ dịghị ihe ga-kpamkpam adigide. Anyị na-ahụ nke a dịka njem kama ịga ebe.
Gini mere eji eme nri?
Makefood ga-enye ndị ahịa anyị ezigbo ọrụ. Anyị na-ada n'azụ ngwaahịa anyị ma lebara okwu ọ bụla nwere ike ibilite anya na ịmegharị, mbupu na nnyefe. Anyị ga-enye oke asọmpi asọmpi na arịa ọ bụla - ekwela nkwa.
Ọ bụrụ na ị nwere ịjụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ ozi ịkpọtụrụ gị na anyị ga-kpọtụrụ gị n'ime 24 awa.
48lọ 4810, Huarun Building A, No.6 Shandong Road ， Qingdao ， China
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ, Sitemap, China Oyi kpọnwụrụ Tilapia GS, Oyi kpọnwụrụ Tilapia ọnwa bee, China Oyi kpọnwụrụ Tilapia, Oyi kpọnwụrụ Tilapia GGS, China Tilapia GS, ASC tilapia fillet,